Idatha Ephelele Akunakwenzeka | Martech Zone
Ukumaketha esikhathini samanje kuyinto ehlekisayo; ngenkathi imikhankaso yokumaketha ngokusekelwe kuwebhu kulula kakhulu ukuyilandela kunemikhankaso yendabuko, kunemininingwane eminingi etholakalayo ukuthi abantu bangakhubazeka ekufuneni idatha eyengeziwe nemininingwane eyi-100% enembile. Kwabanye, isikhathi esilondoloziwe ngokwazi ukuthola ngokushesha inani labantu ababone isikhangiso sabo esiku-inthanethi phakathi nenyanga ethile sinqatshiwe yisikhathi abasichitha bezama ukubona ukuthi kungani izinombolo zemithombo yabo yomgwaqo zingezi.
Ngaphandle kokwehluleka kwemininingwane ephelele, kukhona nenani lemininingwane elikhathazayo. Empeleni, kuningi kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kungaba nzima ukubona ihlathi lezihlahla. Ngabe ngidinga ukubheka isilinganiso se-bounce noma isilinganiso sokuphuma? Impela, izindleko zekhasi ziyinto ebalulekile yedatha, kepha ngabe kukhona okuguqukayo okungcono okungakhombisa ukuthi ikhasi lokuqukethwe elinikeziwe lingakanani ekuqedeleni umgomo oku-inthanethi? Imibuzo ayipheli futhi kanjalo nezimpendulo. Isazi singakutshela, "kuya kuphela", kepha umuntu onekhanda lakhe enkungwini yedijithali analytics bangacabanga ukuthi kunezinombolo eziphelele uma bevele babheke konke.
Kuzo zombili lezi zindawo, impendulo ilula - yenza ngokungapheleli ngoba idatha ephelele kanye / noma idatha ephelele ayinakwenzeka. Omunye wabafana okhuluma kahle ngalokhu ngu-Avinash Kaushik. uma ungalazi igama, ungumculi weNew York Times othengisa kakhulu, omunye wabafana abayinhloko beGoogle futhi usebhodini lamanyuvesi amaningana. Ibhulogi yakhe, i-Occam's Razor, igolide elimsulwa kumhlaziyi wedatha wanamuhla futhi ngisanda kungena kokunye kokuthunyelwe kwakhe okudala okuthiwa, Inqubo Yezinyathelo Ezi-6 Zokuguqula Imodeli Yakho Yengqondo. Kuyo, uchaza umbono wokuthi ayikho iqoqo ledatha ephelele futhi abantu badinga ukulandela indlela elula kakhulu eya ku- "Virtuous Data".
Kuwo wonke amaphuzu amahle awenzayo, okunamathela kakhulu yile:
… Umsebenzi wakho awuxhomekile kudatha enokuthembeka okungu-100% kuwebhu. Umsebenzi wakho uncike ekusizeni inkampani yakho i-Move Fast and Think Smart.
Ngokuzayo lapho ulayisha i-Analytics, khumbula nje ukuthi uma usebenza nedatha enhle futhi ulandele umkhuba omuhle kakhulu, kufanele ube ukulungele ukuthatha isinqumo sokuthi uzoqhubekela kanjani phambili. Ngoba akunandaba noma yimiphi imizamo ongayisebenzisa ekufuneni idatha ephelele nephelele, isikhathi osichithe ukwenza lokho besingasetshenziswa ekusebenzeni ngamanani wokuguqulwa, ukudala isivivinyo esisha sokuhlukanisa, njll. Uyazi, izinto ezizosiza inkampani yakho khula ugcine umsebenzi wakho.
Ufuna ukuqala ingxoxo? Ngithinte ku-Twitter @simphiwedana.
Tags: Ama-AnalyticsukuguqulwaIdathaimeyili MarketingUbuqothoisikhathi
Isithandwa se-Tech ebesakha amawebhusayithi iminyaka eyi-15, sisebenza neminikelo ye-SaaS ye-6, kanye nokuqothula i-Indiana University basketball kusukela ngineminyaka engu-2.
Ukutholwa Kokukhokhelwa Ngezikhangiso zeStumbleUpon